मतगणना नसकिँदै किन हार स्वीकारे बेलकाका मेयर उम्मेदवार थापाले? :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
मतगणना नसकिँदै किन हार स्वीकारे बेलकाका मेयर उम्मेदवार थापाले?
थापा भन्छन्- टाउको काटेर भोट हाल्नु भनेपछि कसरी जितिन्छ?
उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा मतगणना नसकिँदै नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार दुर्गाकुमार थापाले हार स्वीकार गरेका छन्। कुल मत खसेकोमध्ये एकचौथाइ पनि मत गनेर नसक्दै थापाले हार स्वीकारेका हुन्।
थापाले आफूलाई पार्टीबाटै अन्तर्घात भएको बताउँदै अब चुनाव नजित्ने सेतोपाटीसँग बताए।
‘सबै ठाउँमा टाउको काटेर भोट हाल्नु भन्ने अभियान चलाएपछि कहाँ जितिन्छ?,’ थापाले भने, ‘मैले हार स्वीकारिसकेको हो। जित्ने सम्भावना नै छैन।’
निवर्तमान मेयरसमेत रहेका थापालाई यसपालि भने कांग्रेस उम्मेदवार अशोक कार्कीले पछि पारेका छन्।
यसअघिको निर्वाचनमा भने थापाले उनै कार्कीलाई पछि पार्दै मेयर जितेका थिए। त्यो बेला थापा झन्डै ६ सय मतान्तरले विजयी भएका थिए।
तर यसपटक भने थापा कार्कीभन्दा ८ सय बढी मतले पछि छन्। पछिल्लो मत परिणामअनुसार कार्कीले ३०७१ मत ल्याउँदा थापाको २२२५ मत छ।
सहायक निर्वाचन अधिकृतका अनुसार हालसम्म वडा नम्बर १, ७ र ९ को गणना भइसकेको छ। जसमा वडा नम्बर १ र ९ मा कांग्रेस र ७ मा माओवादीका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। अहिले वडा नम्बर २, ६ र ८ को गणना भइरहेको छ।
बेलकामा कुल ३३ हजार मतदाता रहेकामा करिब साढे २१ हजार मत खसेको छ। तर एकचौथाइ मत गनेर नसक्दै एमालेका थापाले आफू पराजित भइसकेको जनाएका छन्। उनले आफूलाई हराउन वडावडामा पार्टीभित्रकै नेताहरू लागेको बताए। उनले आफूसँग प्रमाणहरू रहेको भन्दै अन्तर्घात गर्नेलाई पार्टीको बैठकबाट कारवाही गर्ने जनाए।
‘पार्टीभित्रकै साथीहरू लाग्नुभएको छ। मसँग अडियो रेकर्ड नै छ। मलाई हराउन पैसा लिन फलानो ठाउँमा आउनु भनेको सबै रेकर्ड छ,’ थापा भन्छन्, ‘अब पार्टीको बैठक बस्छौं र त्यस्तालाई पार्टीबाट निकाल्छौं।’
नेकपा एमालेका एक कार्यकर्ताले थापालाई निर्वाचनमा टिकट नपाएकाहरूले हराउन भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन्। उनले वडाअध्यक्षमा टिकट नपाएकाहरूले थापालाई हराउन अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेको बताए।
तर अर्का एक नेताले भने थापाले पार्टीलाई संगठित गर्न नसक्दा आज यो अवस्था आएको बताए। वडाध्यक्षका आकांक्षी समेत रहेका ती नेताले भने, ‘जित्दा मैले व्यक्तिगत कारणले जितेको भन्ने अनि हार्दा पार्टीका मान्छेलाई दोष लगाएर हुन्छ? राजनीति त भोलि पनि गर्नुपर्ला नि।’
‘अघिल्लो निर्वाचनमा दुर्गाकुमार थापा मेयरमा लडिरहँदा सबैजसो नेता, कार्यकर्ताहरू खुलेर सहयोग गरेका थिए तर यसपालि त्यो वातावरण कतै देखिएन। जोजसले टिकट पाउनुभयो, उहाँहरू पनि आ-आफ्नै तरिकाले भोट माग्न जानुभयो। त्यसरी भोट मागेर हिँड्दा कार्यकर्तामा वितृष्णा जाग्छ नि,’ ती नेताले भने।
बेलकामा यसपालि गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १, २०७९, ०९:५२:००